Fardo - Fardaha Noti | Fardaha Noti
Fardo Waa xayawaan qurux badan, oo lagu ciyaaro isboorti nooc kasta leh. Waxaan helnay dhowr nooc, oo kala duwan edbinta isboortiga, daryeelka, cudurada, dhakhaatiirta xoolaha iyo dheer iwm. Waxaas oo dhan oo ku saabsan fardaha, waxaan ka heli karnaa booskan.
Talooyin, faahfaahin iyo wax kasta oo la xidhiidha dunida fardo, xayawaan sharaf iyo qurux leh oo inta ay is ilaalinayaan noqon kara xayawaan weyn. Waa inaan maskaxda ku haynaa inaan daryeeleyno iyaga si dhammaan macluumaadka aan u ururin karno iyaga ku saabsan iyo daryeelkoodaba waxay inoo anfacaysaa annaga oo ku raaxeysaneyna fursadaha inay noo fidiyaan, sida trec, labiska ama rodeo ka mid ah xulashooyin kale oo badan. Aynu ku raaxaysanno.
Maqaalka maanta waxaan uga sheekeynaynaa mid ka mid ah qaybaha aasaasiga u ah noole kasta: ...
Spurs waa aalad loo isticmaali karo ficil ahaan dhamaan qeybaha kala duwan ee fardaha. Waxay yihiin nooc ka mid ah kororka ...
Horsdaha Oldenburg, oo sidoo kale loo yaqaan Oldenburg, waa isu ekaansho dhiig-diiran oo ka yimid waqooyi-galbeed Lower Saxony, oo hore ...
Maqaalka maanta waxaan uga hadli doonnaa mowduuc aan horey ugu soo bilownay maqaalka ku saabsan ...
Dhaqdhaqaaqa ayaa ah mid ka mid ah waxyaabaha aasaasiga u ah wadaha marka ay timaado ilaalinta dheelitirka ...
Sidee farasku u eg yahay?
Cudurada qoobab faraska
Waa maxay faraska baay?
Frankel, waa faraska ugu qaalisan adduunka
Immisa sano ayuu faras nool yahay?